Barashada Juquraafiga SOOMAALIYA - TOGAGGA, DURDURADA IYO CEELASHA SOOMAALIYA QEYBTA 7-AAD - iftineducation.com
Togagga waa biyaha mara dhulka korkiisa, kana unkumay roob da’ ay. Haddii aan soo qaadanno togagga soomaaliya badanaba waxa biyahoodu ku dhamaadaan meel aan habooneyn ama badda ayay ku darsamaan.
Durdurada waa biyo socda dhulka dushiisa, Durdurada asalkiisa hore meesha uu ka soo baxo ama ka soo boodo waxa loo yaqaan (IL), kadibna wuxuu noqdaa durduro iyo dhooxooyin kale gedisan, waxana loogu isticmaalaa biyaha durdurada waraabinta xoolaha iyo cabida dadka.
Degmooyinka qaarkoodna waxay isugu daraan cabidda dadka, waraabinta xoolaha iyo beerida qudrada qaarkeed sida degmada Baydhabo, iwm.
Ceelashau waa biyo kujiro dhulka hoostiisa lana qoto si loola soo baxo biyahaas Dawladaha horay u maray waxay biyaha uga la soo baxan ceelashooda makiinada sifeeya dhulka korkiisa keena, kadibna ku shuba si ay barkadaas biyaha u qaybiso xagga cabida ama ugu isticmaalka warshadaha kala gedisan. Haddii aynu u soo noqono dhulkeena soomaaliya labadeena magaalo ee waaeyn xamar iyo hargaysa mooyee, inta kale biyaha ceelasha ayagoo aanay kale habaysanayn ayaa loo isticmaalaa cabidda ay cabaan dadka iyo behaayinkaba. Degmooyinka soomaaliyeed qaarkood waxay kaloo ku daraan qodaal beereed uu itaalkiisa yar yahay.